Jikọọ Android Ngwaọrụ
Naghachi Text Ozi
Naghachi Ndi ana-akpo
Naghachi oku log
Naghachi Audio Files
Wondershare Dr.Fone for Android Bụ ụwa 1st Android faịlụ mgbake software e mere iji naghachi faịlụ si gam akporo igwe na mbadamba. Ọ bụ ike naghachi ederede ozi, photos, kọntaktị, akpọ akụkọ ihe mere, videos, WhatsApp ozi, ọdịyo faịlụ, na ndị ọzọ ma ị accidently ehichapụ ọ bụ furu efu ruru OS okuku ma ọ bụ ROM na-egbu maramara. Ugbu a ọ na-akwado ihe karịrị 2000 Android ngwaọrụ dị iche iche na Android OS nsụgharị.
Atụmatụ na iji Dịkwuo ọma ọnụego nke Ịchọpụta Files
The Android faịlụ mgbake - Wondershare Dr.Fone for Android, anamde nke ọma na-agbake ehichapụ faịlụ na gam akporo ngwaọrụ. Otú ọ dị, ọ bụghị ihe niile na-ehichapụ faịlụ nwere ike natara site gị gam akporo ngwaọrụ ma ọ bụrụ na ị na-adịghị obibi mgbake kwesịrị ekwesị. Tupu na-ala ka mgbake usoro, ị ga-eme ndị Prep ọrụ mbụ:
1). Kwụsị eji gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na oge ị na-ahụ na i ehichapụ ụfọdụ dị mkpa faịlụ accidently ma ọ bụ faịlụ efu enweghị ihe ọ bụla. Ị maara, na-ehichapụ ọ bụ furu efu faịlụ na-agaghị nri pụọ gị Android ngwaọrụ, ma-eche ka a overwritten site ọhụrụ data. N'ihi nke a, ọ bụrụ na ị nọgide na-eji ngwaọrụ gị, mgbe ahụ, na-ehichapụ ma ọ bụ efu data ga-apụ n'anya ruo mgbe ebighị ebi.
2). Chọta a na kọmputa dị nso, ịdị njikere iji naghachi Android faịlụ. Na mee elu mee, mma. Download na wụnye Wondershare Dr.Fone for Android na kọmputa na-eso ntụziaka n'okpuru naghachi Android faịlụ.